Dhammaan buug-yaraha Motorola ee sanadka 2018 waa la sifeeyey | Androidsis
Kaliya dhowr toddobaad illaa 2018, Motorola dhibaato ayaa ku dhici karta. Kataloogga rasmiga ah ee shirkadda loo maleynayo sanadkan ayaa la helay, oo ay ku jiraan khadadka dhexe iyo dhamaadka sare Moto G, Moto Z y Moto X5. Ma jiro wax macluumaad ah oo ku saabsan Moto E5inkastoo maalmo kahor waxaan aragnay muuqaal qarsoon taas ayaa si fiican uga mid noqon karta warkan.
Sawirka ugu horreeya ee aan helno Moto Z3 iyo Moto Z3 Ciyaar (laga yaabee inay tani sidoo kale xaqiijinayso Moto Z3 Force). Labada qalabba waxay yeelan doonaan a 6-inji FullHD + ah oo leh geeso aad u dhuuban iyo waxa ka muuqda sawirka, raad kuma laha akhristaha faraha, wixii aan awoodno inaan dhahno, waxaa lagu dhex dari doonaa shaashadda.
Ku sii wadida sifeynta, waxaan helnaa a Moto Mod taas oo u muuqata anteeno leh taageerada shabakadaha 5G, in kastoo tiknoolajiyaddan wali waa bilaw mana ahan wax soo jiidasho leh oo ku filan in la helo Moto Mod u heellan.
Astaamaha ugu horreeya ee Moto X5
Markaas waxaa jira Moto X5, mid ka mid ah taleefannada la filayo sanadka 2018. Wixii aan u fiirsano waxay yeelan doontaa a 5-inji soo bandhig aan xuduud lahayn oo leh FullHD + qaraar iyo kamaradaha labada hore iyo gadaal. Mar labaad, mobilada waxaa ka maqan akhristaha faraha, sidaas darteed xanta isku-dhafka shaashadda ayaa xoog leh.
Ugu dambeyntiina, waxaan leenahay qoyska Moto G, waxaan leenahay saddexda nooc: Moto G6, Moto G6 Plus, Moto G6 Ciyaar. Taleefoonadan waxay leeyihiin akhristaha faraha shaashadda hoosteeda, laakiin ma haystaan ​​kamarad hore oo labalaab ah.Taas macnaheedu ma waxay tahay in labada kamaradood loo isticmaali doono aqoonsi jiilka soo socda?
Moto G6 wuxuu yeelan doonaa a Processor Snapdragon 450 oo lagu laray 3 ama 4 GB oo RAM ah iyo 32 ama 64 GB oo keyd ahWaxay sidoo kale yeelan doontaa shaashad 5.7-inch ah oo leh xallinta FullHD.
Moto G6 Plus wuxuu qaadan doonaa a Processor Snapdragon 630 iyo 6GB oo RAM ah. Ku saabsan Moto G6 Play weli macluumaad badan ma jiro, laakiin waxaan ognahay inay yeelan doonto mid 4,000 mAh baytariga iyo shaashad la mid ah Moto G6.
Xaqiiqdii inta lagu jiro MWC 2018 Motorola waxay soo bandhigi doontaa faahfaahinta cusub ee aaladaha qaarkood, inta ka horreysana waxaan u dagi karnaa daadadkan weyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Motorola » Dhamaan buug-yaraha Motorola ee sanadka 2018 waa la sifeeyey